10 Izeluleko Zokuphumula Komndeni EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 10 Izeluleko Zokuphumula Komndeni EYurophu
Iholide lomndeni eYurophu lingaba mnandi kakhulu kubazali nezingane zeminyaka yonke uma uhlela kahle. IYurophu izwe lezinqaba namabhuloho, amapaki aluhlaza okotshani nezinqolobane lapho amantombazane nabafana abancane bengazenza amakhosazana namakhosana usuku. Bangu izindlela ezinhle zokuhamba izintaba nezindawo eziningi zokuzidela ngaphandle okukhulu, kodwa ukuhamba nezingane kuyinselele.
Kusuka ekuhleleni kuya ekupakisheni, siklame umhlahlandlela wokugcina ohambweni lomndeni olunephupho. Vele ulandele yethu 10 amathiphu amahle kakhulu weholide lomndeni eYurophu ukuqinisekisa uhambo lomndeni oludumile.
Izitimela kuyindlela enobungane kakhulu imvelo uvakashe. Lesi sihloko sabhalwa sokuba umuntu afunde izindlela zemininingwane Ukuvakasha esenziwa Londoloza Isitimela, Amathikithi Eshibhe Kakhulu Awezitimela Emhlabeni.
1. Amathiphu Okuphumula Komndeni EYurophu: Thola Izingane Zakho Zihileleke
Imfihlo yeholide elikhulu lomndeni kulapho wonke umndeni usemkhunjini futhi ujabulile. IYurophu igcwele izimpawu zomhlaba ezimangalisayo, ezikhangayo, amapaki wokuzijabulisa, nezindawo ongazivakashela, futhi nokwenza izingane zakho zibambe iqhaza ekuhleleni uhambo lwakho oluya eYurophu kuzophenduka iholide lamaphupho. Yenza ucwaningo lwakho kusengaphambili, khetha okuhehayo ofuna ukuvakashela, futhi amabala izingane zakho angathanda, bese ukhetha izingane 3-4 okukhangayo ohlwini. Ngale ndlela wonke umuntu uyajabula futhi unokuthile abheke phambili kukho nsuku zonke.
I-Airbnb ishibhile, ngasese kakhulu, futhi unomuzwa wasekhaya, okuyinto ebaluleke kakhulu ezinganeni uma ukude nasekhaya. I-AirBnB kuyindlela enhle yokuhlala yeholide lomndeni eYurophu ngoba amahhotela aseYurophu abiza kakhulu, ngisho nesivumelwano sasekuseni. Ukuhlala e-Airbnb kukunikeza ikhishi lokupheka ukudla kwakho, ukudla kwasemini, nesikhathi sasekuseni lapho ningaxoxa ngosuku.
Futhi, kunesikhala esiningi nobumfihlo bezingane nabazali, ukuphumula ngemuva kosuku olude luhlola.
UFlorence waya ePisa amanani entengo
I-Rome iye eVenice Izintengo Zesitimela
3. Amathiphu Okuphumula Komndeni EYurophu: Phuma Ematasa City Centre
IYurophu igcwele izindawo ezibabazekayo zemvelo namapaki kazwelonke, ngemigwaqo emihle yokuhamba izintaba nezindawo zepikinikini. Ubukhulu bemvelo eYurophu bunezinto eziningi kangangokuba noma ngabe uhamba nezingane ezincane, usengakwazi ukuhlola izimpophoma nezindawo zokubuka.
Amapaki amaningi ayatholakala nge isitimela kusuka emadolobheni amakhulu. Uma uhlela kusengaphambili futhi woza uzilungiselele, asikho isizathu sokuthi kungani kungafanele ujabule ngaphandle okukhulu futhi ujabulele umoya ohlanzekile, amahlathi, namapaki anetimu.
4. Bhuka Izinto Zokuhamba Zakho
Ukwazi indlela yakho yokuthola indawo engaphandle kubalulekile lapho uhamba nezingane. Awufuni ukulahleka futhi uzulazule edolobheni ngezinyawo noma uhambela esikhumulweni sezindiza, kungakhathalekile ukuthi isimo sezulu sinjani. Ngakho-ke, ukuhlela nokubhuka izindlela zakho zokuhamba eYurophu kuzothembisa iholide lomndeni elihle.
Izinto zokuhamba zomphakathi zithembeke kakhulu futhi ukhululekile eYurophu. Kunezinketho eziningi zokuhamba ngaphakathi nangaphandle kwezikhungo zedolobha. Ukuhambahamba ngesitimela nethilamu kuhle ngezingane ngoba ungafinyelela yonke indawo, gwema ithrafikhi kubhajethi yohambo lwakho.
Ngokuqhathanisa ne- ukuqasha imoto nokuchitha isikhathi esiningi ngifuna ukupaka noma nje ukugxila emgwaqweni, ungajabulela ukuhamba nokudla okulula, lapho a isitimela ukuhamba nezingane eYurophu. Okukhulu kakhulu inzuzo yokuhamba eYurophu nezingane ngesitimela ukuthi izingane zihamba mahhala nge-Euro pass pass.
5. Amathiphu Okuphumula Komndeni EYurophu: iphakethe Khanyisa
Okuhambayo e Iziteshi zezitimela zaseYurophu ngama-stroller namapotimende amakhulu kungaba yinselele. Ezinye iziteshi zezitimela ngeke zibe namakheshi noma ama-escalator, ngakho-ke kungcono ukupakisha nokukhanya kohambo. Qiniseka ukuthi upakisha okuhamba okugoqekayo kanye nama-carry-ons, ngale ndlela uma izingane zikhule ngokwanele, bangakwazi ukuphatha imithwalo yabo.
Ngaphandle, ukukhanya kokupakisha kusho ukupakisha konke okubalulekile ekuhambeni komndeni. Ngakho, ukugcina izingane zimatasa ngokugibela isitimela ngezinto zokufaka imibala, amabhuku alalelwayo, noma isikhathi sokubuka opopayi ku-iPad, kuzoba usizo olukhulu.
EMunich kuya ePassau amanani entengo
ENuremberg kuya ePassau Amanani Esitimela
Izintengo Zesitimela zaseSalzburg ziya ePassau
6. Ukudla Ngaphandle Nezingane EYurophu
Kufanele wazi ukuthi izindawo zokudlela eYurophu azinikezi izingane ukudla, ngakho-ke abadala bayo’ izingxenye zawo wonke umuntu. Lokhu kubaluleke kakhulu ukuthi uqaphele isibonelo uma uhambela i-Italy, ngeke uthole usayizi wezingane we-pizza noma izingxenye ze-pasta, ngakho-ke lungela.
kodwa, akudingeki udle ngaphandle. Esinye sezeluleko zethu ezinhle kakhulu zokuhamba nezingane eYurophu ukuba naso amapikiniki omndeni. Kuningi okushiwoyo ngamapaki nemvelo yaseYurophu ngoba izindawo ezinhle ezihlaza ziklanyelwe ukusingatha ipikinikini yomndeni wakho. Bamba amaqebelengwane, izithelo ezintsha, nemifino emakethe yendawo futhi ulungele ipikinikini yasemini. Amanani ezimakethe zabalimi ashibhile kakhulu kunasezitolo ezinkulu nasezitolo zokudlela. Ukukufaka phezulu konke, cabanga nje ngemibono ozoyijabulela ngakho konke ukulunywa okukodwa futhi ngokuphelele mahhala.
EMunich kuya kuZurich Izintengo Zesitimela
Amanani eBerlin aya eZurich
I-Vienna kuya ku-Zurich Amanani Wokuqeqesha
7. Amathiphu Okuphumula Komndeni EYurophu: Izikebhe Nezinkambo Zokuhamba Zamahhala EYurophu
Ungazenzela ngokwakho ngemephu nezincwadi nezinhlelo zokusebenza, kepha ukujoyina isikebhe noma uhambo lokuhamba ngezinyawo kungcono kakhulu. Emadolobheni amaningi aseYurophu kunamadolobha amahhala wokuhamba ngezinkombandlela zasendaweni. Lo mhlahlandlela ojabulayo uzobonisa futhi utshele izimfihlo ezigcinwe kahle zedolobha, ngaphandle kokuthi ulahleke emigwaqweni ’emigwaqweni. Umhlahlandlela uzokhomba nezindawo zokudlela zasendaweni ezinamamenyu asethelwe kwasemini futhi anikeze izeluleko ezinhle kakhulu zalokho okufanele ukwenze edolobheni.
IYurophu igcwele imisele nemifula, ngakho ukuvakasha isikebhe ngomunye ubumnandi nendlela eyingqayizivele yokuhamba nokuhlola. Kuzoba mnandi kokubili ezinganeni futhi kuziphumulele.
8. Yenza Isikhathi Sokuhamba KweCarousel
Iningi lamadolobha aseYurophu lizoba ne-carousel ekhanyayo nenhle esigcawini esikhulu sedolobha. Esikhundleni sokugijimela esizeni esilandelayo, Ima, futhi uvumele izingane ukuba ziqhubeke nokugibela okuningi njengoba zifuna. Ukujabulela ukuhamba nge-carousel lapho i-Eiffel Tower ingemuva kwakho, umzuzu okhumbulekayo ezinganeni nakubantu abadala.
9. Amathiphu Okuphumula Komndeni EYurophu: Yenza Isikhathi Sokuthi "Eshu"
Ngoba nje useSwitzerland, akuqinisekisi ukuthi konke kuzohamba kahle ohambweni lwakho lomndeni. Lapho uhamba nezingane, noma yini ingenzeka, ngisho naseYurophu, so be sure to leave time for oops on the trip. Make time for unplanned surprises, ukubambezeleka, izinguquko ezinhlelweni ngenxa yezingane ezinomsindo, futhi ubekhona futhi ukulungele ukuzivumelanisa.
10. Khombisa i-The Kids Europe Off The Beaten Path
Esinye sezeluleko zethu eziphezulu zokuhamba nezingane sibabonisa ukuthi bangakwenza kanjani ukuhamba endleleni eshayiwe eYurophu. Gwema uquqaba ezigcawini eziyinhloko, imigqa ye-gelato, nemifanekiso yomndeni, ngokubayisa kulezo zindawo ezicashile, amadolobhana amahle, kanye nemvelo engavamile.
Izingane zithanda izinganekwane nokuzijabulisa, ngakho-ke thatha lezo zindawo izinganekwane zenziwe ngazo. Kuyindlela enhle yokusebenzisa isikhathi sekhwalithi ndawonye, yenza okungcono kakhulu eholidini lomndeni eYurophu, futhi ubafundise ngamasiko acebile nomlando waseYurophu.
IYurophu iyindawo enhle yamaholide omndeni nganoma yisiphi isikhathi sonyaka. Noma ngabe ungumndeni ofuna i-adventure noma uthanda ukubona indawo kanye neminyuziyamu, IYurophu inakho konke. Ngaphezu kwalokho, IYurophu inobungani emndenini uma kukhulunywa ngezinto zokuhamba kanye namaphasi akhethekile edolobha. Esethu 10 amathiphu amahle kakhulu eholide lomndeni eYurophu azoba usizo olukhulu lapho uhlela uhambo lwakho olulandelayo noma lokuqala ngisho lokuya ezweni lezinqaba nezinganekwane.
IPadua iya eVenice Izintengo Zesitimela
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza uhlele amaholide omndeni amahle kakhulu eYurophu ngesitimela.
Ngabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “Izeluleko Ezinhle Eziyi-10 Zokuphumula Komndeni EYurophu” kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url =Https://www.saveatrain.com/blog/tips-family-vacation-europe/ ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, you will find our most popular train routes – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, futhi ungashintsha i- / ja kuye / es noma / de nezinye izilimi.
Europewithkids iholide lomndeni familytrip Familytripeurope familyvacation traintravelwithkids